Doorashada Somaliland: Ha Noqon Doqon Qabiiliste ah ee Noqo Muwaadin Xalaal ah • Oodweynenews.com Oodweyne News
Kuwa doqominta ahaa (the idiots), kuwani ma aha qaar maskaxada wax ka qaba ama waali ay ku jirto, laakin waa qaar iyaga oo keliya wax isla jecel ama isla doonaya (self centred), waxay had iyo jeer ku hawlan yihiin sidii iyagau wax kasta uga faa’iidaysan lahayeen, dantooda uga fushanan lahayeen, wax kasta waxay ka horumarinyaan dantooda gaarka ah. Kuwaasi ma laha wax karaamo ah, wax faa’iidahana uma laha bushada.
Kuwa qabiilisteyaasha ah (the tribalism) waa kuwa uu fikirkoodu uusan dhaafsiisnayn Beeshooda ama Qabiilookda, waxaa Diin u ah Qabiilooda, Qabiilnimaduna waa wax ay caabudaan, wax kasta waxay ku eegan ama ku fiiriyaan waa indhaha qabiilka, (waa kuwii uu Ibrahim Gadhle ku sheegay: Maskaxaddadu yay noqon maqal lagula leeyahay, yaan toban muftaax iyo lagu furan masaabiir), had iyo jeer waxay shaki iyo baqo ka qabaan qabiilooyinka kale. Kuwaasi waxay had iyo jeer ku jiraan dacaayad, cagjuglayn, iyo wax ka sheegid beel kale ama Qabiil kale. Waa kuwo had iyo jeer col u jooga ah.
Kuwa saddexaad waa Muwaadanka (the citizen) waxaa uu Greeks hore ku sheegay in ay yihiin muwaadanka leh xirfada, cilmiga ee bulshada kula nool ixtiraam (respectable public lives), waa qofka had jeer qiimeya hantida guud, si fiican u og xuquuqda lagu leeyahay iyo masuuliyada ka saran bulshada, ama had iyo jeer u taagan caawimada bulshada. Waa Greeks hore (Ancient Greeks)